Ny fomba tokana ho an'ny indostrian'ny famokarana fitaovana diamondra
Ny fampiharana sy ny toetry ny fitaovana diamondra. Miaraka amin'ny fampivoarana ny toe-karena eran-tany sy ny fanatsarana ny fari-piainan'ny olona, ​​ny vato voajanahary (granita, marbra), jade, vato artifisialy avo lenta (vato microcrystalline), seramika, fitaratra ary vokatra simenitra dia nampiasaina betsaka tao an-trano. .
Fironana amin'ny fikosoham-bary amin'ny fikosoham-bary
Antony maro no tsy azo tsinontsinoavina mandritra ny fikosoham-bary tsofa boribory vita amin'ny firaka. Rehefa misy olana amin'ireo kilema ara-boajanahary voalaza etsy ambony amin'ny substrate, na inona na inona karazana fitaovana ...
Ny fikosoham-bary sy ny fikosoham-bary no fomba farany ho an'ny dingana teo aloha amin'ny fitsaboana kristaly fikarakarana vato na fanodinana takelaka hazavana. Io no iray amin'ireo dingana manan-danja indrindra amin'ny fikarakarana vato amin'izao fotoana izao, tsy toy ny fanadiovana marbra sy savoka an'ny orinasa mpanadio nentim-paharazana. T...
Ity kodiaran'ny kaopy fikosoham-bary 7 mirefy ity dia misy fizarana 6 miendrika zana-tsipìka natao ho an'ny fitotoana simenitra sy gorodona terrazzo, azonao atao koa ny mampiasa an'io kodiaran'ny kodiaran'ny fikosoham-bary io ho an'ny fikosoham-bary na fanomanana simenitra, na fanesorana lakaoly, adhesives, thinset, grout fandriana, na ...
Diamondra fikosoham-bary ho an'ny fitotoana simenitra, Terrazzo, Vato ambonin'ny
Ny fanazavana matihanina momba ny kapila fikosoham-bary dia manondro ny fitaovana fikosoham-bary ampiasaina amin'ny milina fikosoham-bary, izay misy vatana kapila sy fizarana diamondra. Ny fizarana diamondra dia welded na voapetaka amin'ny vatan'ny kapila, ary ny faritra miasa toy izany ...
Raha mikasika ny kodia fikosoham-bary ho an'ny simenitra, dia mety hieritreritra ny turbo kaopy kodia, zana-tsipìka kaopy kodia, tokana andalana kaopy kodia sy ny sisa, anio dia hampiditra roa sosona kapoaka kodia, izany no iray amin'ireo avo indrindra mahomby diamondra kaopy kodia ho an'ny fitotoana. gorodona simenitra. Amin'ny ankapobeny dia ny habe mahazatra no...
Salama daholo, izahay dia Fuzhou Bontai Diamond Tools Co.; Ltd ao Shina, izay manam-pahaizana manokana amin'ny kiraro fikosoham-bary, kodiaran'ny kaopy diamondra, Polishing Pads, fitaovana fikosoham-bary PCD manana traikefa 30 taona mahery. Hanatrika ny World of Concrete Asia 2021 izahay, azafady jereo ny fampahalalana momba ny trano heva eto ambany: Exhibition na...
3 Inch Copper Bond Diamond Polising Pads
Taloha, rehefa manosotra ny gorodona vita amin'ny simenitra amin'ny kiraro fikosoham-bary metaly ny olona, ​​​​dia handeha mivantana amin'ny pads 50 # ~ 3000 # ny olona, ​​​​Tsy misy pads fametahana tetezamita eo anelanelan'ny pads metaly sy pads resin, noho izany dia haharitra ela izany. esory ny scratches lfet amin'ny metaly diamondra pad...
Ny fifantohana diamondra ambony kokoa, ny fiainana lava kokoa ary ny hafainganam-pandehan'ny fitotoana miadana kokoa?
Rehefa miteny isika hoe tsara na ratsy ny kiraro fikosoham-bary, dia matetika isika no mihevitra ny fahombiazan'ny fikosoham-bary sy ny fiainan'ny kiraro fikosoham-bary. Ny fizarana kiraro fikosoham-bary dia ahitana diamondra sy metaly. Satria ny tena asan'ny fatorana metaly dia ny mitazona ny diamondra. Noho izany, ny haben'ny diamondra sy ny fifantohana ...
Soso-kevitra sasantsasany hisafidianana ny kodiarana kaopy diamondra mety
Ireto ny sasany amin'ireo lafin-javatra tokony hodinihinao rehefa mifidy kodiaran'ny kaopy diamondra. Anisan'izany ny: 1. Safidio ny sokajy mety amin'ny kodiaran'ny kaopy diamondra Ny kodiaran'ny kaopy diamondra dia misy karazany maro noho ny fepetra samihafa. Ny fampiharanao dia hisy fiantraikany betsaka amin'ny sokajy diamondra...
Ny tariby diamondra mahagaga dia nahita
Misy tady mahagaga izay afaka mivezivezy mandroso sy miverina eo amin'ny tetezana, manapaka ny tobin'ny tetezana vita amin'ny simenitra, tsotra toy ny manapaka mofomamy, ary misy tabataba sy loto ambany, ary azo antoka sy azo antoka. Ity karazana tady mahagaga ity dia ampiasaina amin'ny lalana avaratra atsinanana sy ny fanitarana ny tetezana ary ny fanamboarana ...